डोटेली भाषामा गाइएका सवै गीतलाई डेउडा मान्न सकिन्न – भानुभक्त जोशी | दर्पण दैनिक
डोटेली भाषामा गाइएका सवै गीतलाई डेउडा मान्न सकिन्न – भानुभक्त जोशी
प्रकाशित मिति: २०७६ श्रावण २१ गते १०:१६
सुदुरपश्चिममा जति सुन्दर र मनोहर प्राकृतिक दृश्य छन, त्यति नै सुन्दर साहित्य, सभ्यता र संस्कृति छन । यिनीहरुको प्रचार र प्रसार हुन नसकदा यिनको महत्व वुझाउन सकिएको छैन । सो क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा कलाकारीता क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भुमिका रहने गर्दछ । यसैक्रममा कला, साहित्य, सभ्यता र संस्कृतिलाई जोगाउँदै कलाकारीताको क्षेत्रमा स्थान वनाउन सफल वैतडी जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालीका वडा ६ मा जन्मिएका गायक कलाकार भानुभक्त जोशी पनि लागि परेका छन । उनले आफ्नो जीवनको बाल्यकाल देखिनै मन छुने गीत मार्फत कयौं दर्शक श्रोता मन जितिसकेका छन । उनले गीत मात्रै गाउदैनन सो क्षेत्रको माटो कला, संस्किृति तथा अन्य कुरामा पनि आवाज उठाउने गर्छन । नेपाली कलाकारीता, डेउडाको अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रही विगत एक दशक देखि डेउडा गीत संगीतमा सक्रिय कलाकार भानुभक्त जोशीसँग दर्पण दैनिकको लागि प्रेमराज जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
गीत संगित, चलचित्र, कमेडी तिर ब्यस्त छु ।
हाल गित संगितको माहोल कस्तो छ ? यसलाई वजारमा पु¥याउनु के कस्ता कठिनाईहरु छन् ?
वजार एक दमै राम्रो छ, चलिरहेकै छ पहिलेको भन्दा अहिले अलि फराकिलो छ । प्रविधिको कारणले गर्दा समयमै सवै दर्शक श्रोता माझ पुर्याउन सकिएको छ । यसले गर्दा आफुले सजिलैसँग दर्शक श्रोताहरु सँग भेट गर्ने मौका पाएको छु ।
सांगितिक यात्र कहाँ वाट सुरु भयो ? तपाईलाई यो क्षेत्र सम्म पुर्याउन कस्को प्रेरणा हो ?
प्रेरण भन्दा पनि आफु भित्रको अन्तरचेतनाले नै आफु यो क्षेत्रमा यहाँ सम्म पुगेको हुँ । सुरुमा २०६५ सालमा पहिलो गीत रेकर्ड गर्न त्यो भन्दा पुर्व एक दुई वर्ष कल्पाना गरी यो क्षेत्रमा प्रवेश गरे । दामोदर कार्की अग्रज हुनुहुन्थ्यो उहाँकै सहयोगले म आज कालाकारको नामले परिचित छु ।
तपाईको विगतलाई सम्झिनु पर्दा, वाल्यकामा कसरी वित्यो ?
सानो छदा एकदमै रुचिको विषय कलाकारीता, स्टेज कार्यक्रम, विद्यालयका कार्यक्रम र गोठालो जाँदा वनजङगलमा जाँदा पनि अरुले गाएका गीत तथा कुनै आफ्नै सिर्जना गुनगुनाई राख्थे । नाच्ने, पाठहरु घोक्ने, कमेडी गरिराख्ने गर्थे यसरी नै वाल्यकाल वित्यो ।
कस्ता खालका गितहरु गाउँनु भएको छ ?
धेरै गितहरु रेकर्ड भैसकेका छन् । देशभक्ति, सामाज परिवर्तन र समाजलाई चेतना दिने गितहरु अलि वढी नै लेख्छु, गाँउछु पनि । हास्यौली, ठट्यौली, ब्याङग्यात्मक गितहरु पनि लेख्छु । वेदना र विछोडका गितहरु पनि लेखिरहेको हुन्छु । कारुणीक गितहरु पनि वजारमा आईसकेका छन, कारुणीक गितहरुलाई पनि दर्शक श्रोतहरुले धेरै मन पराएका छन ।
सुदुरपश्चिममा जस्तो विकट ठाउँमा जन्मिनु भएको तपाईले यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा के कस्ता दुःख र सघर्ष गर्नुप¥यो ?
जिन्दगी यात्रा हो । संघर्ष जुनसुकै विद्या जुनसुकै क्षेत्रमा गर्नुनै पर्ने हुन्छ । संघर्ष नगरिकन मान्छे सफल पनि हुदैन । दुःख कष्ठ भोग्नै पर्छ भोगेको पनि छु । केहि पाउन केहि गुमाउनु पर्छ भन्या जस्तो सघर्ष र दुःख कष्ठ नगरी त केहि पनि हुदैन् । पहिला पहिला एलवंम चल्दा आर्थिक पाटो पनि संकलन हुन्थ्यो अहिले त स्थिति त्यस्तै छ । तिन चार वर्ष विचमा एकदमै दुःखत र कष्ठकर जिन्दगी नै वित्यो ।
हाल सम्म कतिवटा गीत गाँउनु भएको छ ?
हाल सम्म ७७ वटा गितहरु आफ्नै आवाजमा गाएको छु । २७७ लेखेको छु । गाउँनु भन्दा लेख्न चाहि सारै मन पर्छ, म गीत धेरै लेख्छु नै ।
गीत संगित के हो ?
ब्यथा र खुसी मिसिएको खिचडी हो जस्तो लाग्छ, कुनैमा कथाको ब्यथा वगेको हुन्छ, भने कुनैमा हास्यव्यङग्य रमाईलो ठट्टैयौली खालका भावहरु वगेका हुनाले म यस्लाई समग्रमा परिभाषा गर्दा ब्यथा र खुसी मिसिएको खिचडि नै गित संगित हो जस्तो लाग्छ ।
तपाईले प्रायः डेउडा गाउनु पनि हुन्छ लेख्नु पनि हुन्छ ? आखिर यो डेउडा भनेको चाहि के हो ?
वास्तविक डेउडा भनेको ताल मिलाएर डेडपाईला अगाडि डेडपाईला पछाडि सरेर जातहरु, चैतलो, विहेवर्तमा गाउँघरतिर खेलीन्थ्यो त्यहि नै देउडा हो । अहिले समयको आधिवेरी सँगै विभिन्न किसिमका गितहरु आए । अहिले डोटेली भाषामा गाएको गित लाई डेउडा भनेर भन्छन, तर त्यो वास्तमा होईन देउडा भनेकै डेडपाईला अगाडि डेडपाईला पछाडि सरेर ताल मिलाएर खेलिने खेल देउडा हो ।
तपाईले गीत गाउँदै गर्दा समाजलाई के योगदान पु¥याएको जस्तो लाग्छ ?
समाजमा ब्यथा र पिडा पकै पनि हुन्छन । गीत संगितले कसैन कसैको जिन्दगी सँग मेल खाएको हुन्छ । दुःखी गितहरुले उनलाई वाँच्ने प्रेरणा दिएको हुन्छ । हास्यब्यङगात्मक गितहरुले जन्ति विहे भोजमा रमाईलो मुहार हसिलो र पिडाले चर्केका घाउँमा मलन लगाउने काम, यात्राको सहयात्री बनि यात्रा सहज वनाउनमा पक्कै पनि यसले योगदान पुर्याएको छु, जस्तो लाग्छ ।
जिवन निर्वाहका लागी आधारभुत आवश्यकतासँगै जोडिएको क्षेत्र गीत संगित पनि हो जस्तो लाग्छ । प्रायः संगित मन नपाराउने कमै होलान् मेरो विचारमा पक्कैपनि संगितको माध्यमले कलालकारले समाजको जल्दोवल्दो, सत्य कुरालाई कुनै न कुनै गित र लयको माध्यमले समाजमा ल्याई सन्देश दिने काम गरेकै हुन्छ ।
तपाईले कमेडि पनि पनि गरी राख्नु भएको छ ?
डोटेली भाषाको माध्यमवाट सुरुमा कमेडी लेख्ने ब्याक्ति र पर्दामा ल्याएर जन्म दिने भनेर चिन्छन् मलाई । डोटेली भाषामा कमेडी लाई कौमिक भन्छ । डोटेली भाषाको पहिलो चलचित्र मैले निर्माण गरेको हुँ सुरु मैले गर्दा अहिले आएर धेरैले वनाइराछन मन पराए । मेरो गित संगीत जस्तै यो पनि रुचिको विद्या हो ।
सुरुमा कति सालमा कुन गित गाउँनु भएको थियो ?
२०६५ सालमा धनगडीको नमुना डिजिटल रेकर्डीङ स्टुडियो वाट ‘सुनीता सुनको माला आखाँका आशु, तैँ पराईको आँगन सजाई म कसरी हाँसु’ भन्ने विछोडको गीती एल्वम नै निकाले । त्यसपछि २ वर्ष व्रेकअफ भो पढाईको दौरानले गर्दा र पछिल्लो समय राजधानी छिरेपछि साहित्यमा पनि कलम चलाएर । जसमा तिनवटा कृति धर्ति पोल्छ, गौरा एक महान पर्व, सुदुरपश्चिम गीती संङग्रह मञ्च निकाले र पछिल्लो समय आएर सागितिक र साहित्यका सवै विद्याहरुलाई मैले छोएकै छु ।
लक्ष्य त यो क्षेत्रवाट कहि कतै मोडिने र मोड्ने त छैन । तर देशको लागि केहि गरेर नेपालको राष्टिय झन्डा ओडेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा छु । शब्दका वादलहरु भन्ने उपन्यास पनि लेख्दैछु । केहि समयमै वजारमा ल्याउने प्रयास गर्दैछु । पढाइलाई पनि एमफिल गरेर पिएचडि सम्म गर्ने विचारमा छु ।
खासै छ जस्तो त लाग्दैन् तरपनि सम्पुर्ण सुदुरपश्चिमि दाजुभाई दिदि वहिनीहरुले सुदुरपश्चिमको कला संस्कृति धर्म रितिरिवाजलाई माया गर्नु होला । कला संस्कृतिलाई नै माया गर्दा हामी पनि यो क्षेत्रमा टिकाउन सजिलो हुन्छ । सम्पुर्ण दर्शक श्रोताहरुको माया ममता जो छ त्यहि कायम रहोस् संस्कृति जोगियोस आफु जन्मिएको माटोको माया होस् भन्छु ।